Madaxwayne Gaas “Punland Jariifka sharcidarada ah waxa ay u aqoonsatay Musiibo Qaran” | Puntland Maritime Police Force
Madaxweynaha Dowlada Puntland Cabdi Wali Gaas ayaa si kulul uga hadlay jariifka lagu hayo khayraadka Xeebaha Puntland oo uu sheegay in kooxa burcad ah qaab xatooya ah uga kaluumaystaan Xeebaha ku teedsan deeganada Plnd.
Madaxweyne Gaas oo Shir Saxaafadeed ku qabtay Magaalada Bosaaso Xarunta Gobalka Bari ayaa sheegay in kaluumaysiga sharcidarada ah uu yahay Mushkilad caalami ah oo dhibaata xoogan ku haysa Wadama badan oo xeebalay ah Soomaaliya ka mid tahay.
Waxa uu sheegay in isku dar aduunka laga xado kaluun qiimahiisa lagu qiyaasay sanadkii inta u dhaxaysa 4 ilaa 9 milyan oo dollarka Maraykankanka ah oo qab xoatooya ah loo qaato.
Wadamada ka hooseeya Saxaraha oo soomaaliya ku jirta ayuu sheegay Madaxweyne Gaas in ku waayaan kaluumaysiga sharcidarada ah lacag dhan 1 bilyan oo dollarka maraykanka ah.
Halka Soomaaliya kaliya uu sheegay in ku wayso kaluun qiimahiisa gaarayo 300 milyan oo dollar sida lagu sheegay warbixino caalami ah uu xusay Madaxweyne Gaas in meela kala duwan ka soo baxeen.
Hayeeshee waxa uu tilmamay in nasiib daro tahay in aan lacag ahaan loo qiimayn qalabka laga bur buriyo kaluumaysatada nolal maalmoodkooda ka raadsada Xeebaha kuwaas uu sheegay in dhibaata ku qabaan Kaluumaysiga sharcidarada ah.
Hadaba Madaxweyne Gaas asaga oo qiimayn ku samaynaya cabashooyinka ka soo gaaraya Bulshada degan Xeebaha islamarkaana uu tixgalinayo tala soo jeedin Wsaaradda Kaluumaysiga Puntland,waxa uu sheegay in aan loo adkaysan karin arintaa.
Madaxweyne Gaas ayaa xusay in Kaluumaysiga Sharcidarada ah u aqoonsatay Puntland “Musiibo Qaran” islamarkaana wixii hadaka danbeeyay aysan gacamaha ka laaban doonin oo awooda Dowlada ,iyo shacabka loo jahayn doono la dagaalanka Kaluumaysiga sharcidarada ah.
Madaxweynaha ayaa sheegay in tilaabo sharciya laga qaadi doono cid alaale iyo cidii ku howlan kaluumaysigaa sharcidarada ah haday ahaan lahayd Soomaali ama ajaaniib kale waxa uuna amar ku siiyay Ciidamada Bada Puntland in shaqadooda dadar galiyaan.
Madaxweyne Gaas ayaa xusay in Puntland ogolaan doonin in khayraadkeeda la gurto waxa uuna ka codsaday Beesha Calamka iyo dalalka dariska la ah Soomaaliya in Dowlada Puntland ku gacan siiyaan dagaalka ka dhanka ah Kaluumaysiga sharcidarada ah.